५७ जना कोरोना संक्रमित को को हुन् (सुचीसहित) – NawalpurTimes.com
५७ जना कोरोना संक्रमित को को हुन् (सुचीसहित)
प्रकाशित : २०७७ वैशाख १७ गते १९:३४
काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या ५७ पुगेको छ । आज थप तीन नयाँ संक्रमित बारा र पर्सामा भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आज संक्रमित पर्साका ४६ वर्षीय पुरुष हुन् । अन्य दुईजना बाराका ३१ र ४३ वर्षीय पुरुष हुन् । उनीहरु सीमराको क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा परीक्षणका क्रममा संक्रमित भेटिएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कुल ५७ संक्रमितमध्ये १६ जना नीको भई घर फर्किइसकेका छन् । ४१ जना विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचाररत छन् ।
१. चीनबाट फर्केका युवकको ९ माघमा संक्रमण पत्ता लागेको थियो, माघ महिनामै टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज
२. फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया किशोरीको ९ चैत्रमा पत्ता लागेको । ६ वैशाखमा संक्रमणमुक्त भई टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज
३. युएईबाट फर्किएका ३२ वर्षीय युवकको १२ चैत्रमा पत्ता लागेको, १० वैशाखमा टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज
४. युएईबाट फर्किएका ३४ वर्षीय युवकको १४ चैत्रमा पत्ता लागेको, १० वैशाखमा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
५. बेल्जियमबाट फर्किएकी १९ वर्षीया किशोरी अंशु सापकोटाको १५ चैत्रमा पत्ता लागेको, १२ वैशाखमा धौलागिरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
६. फ्रान्सबाट कतार हुँदै फर्किएकी बाग्लुङकी ६५ वर्षीया महिलाको २० चैत्रमा पत्ता लागेको । ६ वैशाखमा संक्रमणमुक्त भई धौलागिरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
७. भारतको मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय पुरुषको २२ चैत्रमा पत्ता लागेको । ७ वैशाखमा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
८. भारतको उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुषको २२ चैत्रमा पत्ता लागेको । ९ वैशाखमा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
९. कैलालीकी ३४ वर्षीया महिला यसअघि कैलालीमा संक्रमित भेटिएका पुरुषको आफन्तको २२ चैत्रमा पत्ता लागेको, लम्की चुहा नगरपालिका भरुवाकी उनी ११ वैशाखमा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१०. वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ३७ वर्षीय भारतीय नागरिकको २९ चैत्रमा पत्ता लागेको, १४ वैशाखमा नीको भई नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
११. वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ५५ वर्षीय भारतीय नागरिकको २९ चैत्रमा पत्ता लागेको, वैशाखमा नीको भई नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१२. वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ४४ वर्षीय भारतीय नागरिकको २९ चैत्रमा पत्ता लागेको, वैशाखमा नीको भई नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१३. रौतहटका १९ वर्षीय युवकको १ वैशाखमा पत्ता लागेको, वैशाखमा नीको भई नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१४. कैलालीकी ६५ वर्षीया महिलाको लम्किचुआ नगरपालिकमा १ वैशाखमा पत्ता लागेको, १२ वैशाखमा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१५. काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित सनसिटीमा बसोबास गर्ने ५८ वर्षीय पुरुषको २ वैशाखमा पत्ता लागेको, बेलायतबाट फर्केका परिवारका सदस्य, ११ वैशाखमा पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१६. काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित सनसिटीमा बसोबास गर्ने ८१ वर्षीया महिलाको २ वैशाखमा पत्ता लागेको, बेलायतबाट फर्केका परिवारका सदस्य, ११ वैशाखमा पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज
१७. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ३४ वर्षीय भारतीय पुरुष, ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
१८. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २९ वर्षीय भारतीय पुरुष, ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
१९. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २६ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२०. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२१. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२२. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२३. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२४. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २२ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२५. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २५ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२६. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २० वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२७. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ४० वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२८. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २९ वर्षीय भारतीय पुरुष, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
२९. २७ वर्षका युवक चितवनस्थित राप्ती नगरपालिका घर भएका हुन् । उनी ३ चैत्रमा हङकङ हुँदै बेलायतबाट फर्किएका थिए, , ५ वैशाखमा पत्ता लागेको, १३ वैशाखमा भरतपुर अस्पतालबाट डिस्चार्ज
३०. ६३ वर्षीया महिला चितवनस्थित राप्ती नगरपालिका घर भएकी हुन् । उनी ३ चैत्रमा हङकङ हुँदै बेलायतबाट फर्किएका युवककै आमा हुन् । उनी छोरासँगै फर्किएकी थिइन्, ५ वैशाखमा पत्ता लागेको
३१. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ६५ वर्षीय वृद्ध, ६ वैशाखमा पत्ता लागेको, कोशी अस्पतालमा उपचाररत
३२. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका १८ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३३. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका १८ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३४. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका २० वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३५. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ३३ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३६. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४० वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३७. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४१ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३८. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४१ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
३९. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ५२ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
४०. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ५८ वर्षीय पुरुष, , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
४१. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी ३६ वर्षीया महिला , ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
४२. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी उमेर नखुलेकी महिला, ९ वैशाखमा पत्ता लागेको
४३. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका २४ वर्षीय पुरुष, १० वैशाखमा पत्ता लागेको
४४ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ६० वर्षीय पुरुष, १० वैशाखमा पत्ता लागेको
४५. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ७२ वर्षीय पुरुष, १० वैशाखमा पत्ता लागेको
४६. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी ५५ वर्षीया महिला, ११ वैशाखमा पत्ता लागेको
४७. १४ वर्षीय नाबालिक पुरुष, जनकपुरमा टेष्टका क्रममा ११ वैशाखमा पत्ता लागेको
४८. २६ वर्षीय पुरुष, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका पुरुष ३० फागुनमा साउदी अरबबाट फर्केका थिए । ११ वैशाखमा पत्ता लागेको
४९. ६२ वर्षीय झापा घर भएका पुरुष, कोशी अस्पतालमा उपचाररत, १२ वैशाखमा पत्ता लागेको
५०. ५० वर्षीय पुरुष वीरगञ्ज निवासी, नारायणी अस्पतालमा उपचाररत, १४ वैशाखमा पत्ता लागेको
५१. ५० वर्षीय पुरुष वीरगञ्ज निवासी, नारायणी अस्पतालमा उपचाररत, १४ वैशाखमा पत्ता लागेको
५२. ५० वर्षीय पुरुष झापामा पत्ता लागेको, कोशी अस्पताल, विराटनगरमा परीक्षणका क्रममा पोजेटिभ भेटिएको, १४ वैशाखमा पत्ता लागेको
५३.रौतहटका २४ वर्षीय युवक भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा राखिएका, परीक्षणका क्रममा १६ वैशाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको
५४. रौतहटका ३५ वर्षीय युवक भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा राखिएका, परीक्षणका क्रममा १६ वैशाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको
५५. पर्सा जिल्लाका ४६ वर्षीय पुरुष । यसअघि पर्साको छपकैयास्थित मस्जिदमा २९ चैत्रमा संक्रमित भेटिएका ३ जना भारतीय नागरिकसँगै नेपाल फर्किएका । नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका, १७ वैशाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको
५६. बारा जिल्लाका ३१ वर्षीय पुरुष । यसअघि पर्साको छपकैयास्थित मस्जिदमा २९ चैत्रमा संक्रमित भेटिएका ३ जना भारतीय नागरिकसँगै नेपाल फर्किएका । नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका, १७ वैशाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको
५७. बारा जिल्लाका ४३ वर्षीय पुरुष । यसअघि पर्साको छपकैयास्थित मस्जिदमा २९ चैत्रमा संक्रमित भेटिएका ३ जना भारतीय नागरिकसँगै नेपाल फर्किएका । नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका, १७ वैशाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको